အထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများ (48)
ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်း (45)
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ (76)
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် (40)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 7
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 10
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 28
ပရင့်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း 1
အလုပ် 637 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
-တံမြက်စည်းလှဲ၊ ကြမ်းတိုက်၊ ဖုန်စုပ်ရန် -ကော်ဇောများ၊စားပွဲခင်းနှင့် အိပ်ရာခင်းများလျော်ရန် -မီးဖိုချောင်ခုံများနှင့် မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာသုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် -ကော်ဇောနှင့်စားပွဲခင်းများကို သန့်ရှင်းစွာလျော်ဖွတ်၊ ဖုန်စုပ်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်။ -တံမြက်စည်းလှဲ၊ ကြမ်းတိုက်၊ ဖုန်မှုတ်များကို ဖုန်စုပ်ပြီး ကြမ်းပြင်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်။ -ပြတင်းပေါက်နှင့် နံရံများကိုသန့်ရှင်းရန်။ -အိမ်သာ၊ရေချိုးခန်းနှင့် ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်။ -မီးဖိုချောင်နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ရှိ ကြေးများ၊ အညစ်အကြေးများကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောရန်။ -အမှိုက်ပုံးထဲရှိအမှိုက်များကို ပုံမှန် စွန့်ပစ်ရန်။ -အိပ်ရာခင်းများနှင့်မျက်နှာသုတ်ပဝါများကို များကို လျော်ဖွတ်၊ မီးပူတိုက် ပြီးသိမ်းဆည်းရန်။ -နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပြီးသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားရန်။ -လိုအပ်ပါက အဝတ်များလျော်ဖွတ်ရန်။
*သဃ်န်းကျွန်း(ကျား/မ ၃ဦး) *မြောက်ဒဂုံ (ကျား/မ ၁ဦး) *ရွှေပြည်သာ (ကျား/မ ၂ ဦး) *လှိင် ပါရမီ (ကျား/မ ၁ဦး) မြိုနယ်တွင် နေထိုင်သူ များသာ လျှောက်ထား ပေးပါ နော်။ - စာရင်းစစ်သည့်အပိုင်းကို မှန်ကန်စွာ ဦး ဆောင်နိုင်ရမည်။ - သတ်မှတ်ထား သော လုပ် ဆောင်ချက် နှင့် စည်းကမ်းများ ကို တည်မြဲ အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ - Stock ပိုင်နိုင်ရမည်။ - Product Knowledge များ ကိုယ်တိုင် လေ့လာတတ် သောသူကိုဦးစား ပေးမည်။ - ပေးအပ် သော plan များကိုလဲ သတ်မှတ်ချိန်တွင်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရမည်။
*‌မြောက်ဥက္ကလာ (ကျား/မ 2ဦး) *‌မြောက်ဒဂုံ (ကျား/မ 1ဦး) *ရွှေပြည်သာ (ကျား/မ 2ဦး) **လသာ (ကျား/မ 1ဦး) *သဃ်န်းကျွန်း office (ကျား/မ2ဦး) မြိုနယ်တွင် နေထိုင်သူ များသာ လျှောက်ထား ပေးပါ နော်။ Stock များ ပိုင်နိုင်ရမည်။ Product Knowledge များ ပြန် Train ပေးနိုင်ရမည်။ ဆိုင်ခွဲများသိုလည်း လိုအပ်လျှင် သွားနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: -Bonus (0to 80000 ) [ရက်မှန်ကြေး10000+အချိန်မှန်ကြေး10000]
▪︎သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် နှင့် နီးသူများသာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ▪︎အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ရည်ရှည် လုပ်ကိုင်မည့် သူများသာ ​လျှောက်ထား​ပေးပါရန်။ ▪︎ ပစ္စည်းစာရင်းစစ်ခြင်းကို လည်း ဝါသနာပါသူဖြစ်ရမည်။ ▪︎Social Media ​ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ ▪︎ သင်လွယ် ၊ တတ်လွယ် ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။ ▪︎ သွက်သွက်လက်လက် ရှိရမည်။ ▪︎ဆိုင်ခွဲများသို့လည်း သွား​ရောက်စစ်​ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ ▪︎အကူအညီလိုပါက ဆိုင်ခွဲများသိူ့သွား​ရောက်ကူညီ​ပေးနိုင်ရမည်။
မြေတူးစက်မောင်းဆရာ | Backhoe, Excavator Operator
အောင်ပန်း | ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်
-လျှောက်ထားသူများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ နယ်ဝေးခရီး (ကလောနှင့်အောင်ပန်းဒေသ)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -လျှောက်ထားသူများသည် CV FORM နှင့်တကွ ပညာရေး၊နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်၊ သန်းခေါင် စာရင်း၊အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်၊အကျင့်စာရိတ္တ- ရပ်ကွက်/ရဲစခန်း စသည့်ထောက်ခံချက်မိတ္တူများနှင့်အတူ လိုင်စင်ပုံ(၂)ပုံဖြင့် အောက်ပါလိပ်စာသို လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊E-mail နှင့်ဖြစ်စေလာရောက်လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။ -ကိုဗစ်ကင်းစင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှစစ်ဆေးထားသော ဆေးလက်မှတ်များ ယူဆောင်လာရမည်။ -နေ/စား စရိတ်ငြိမ်းဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
Backhoe Breaker Operator
(Excavator , Wheel Loader)မြေထိုး၊မြေကော် ၊မြေထုတ် ယန္တရားစက်ပြင်ဌာနအတွက် လိုအပ်ချက်) စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူနှင့် wiring လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Tropical Beer & BBQ
ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ စားပွဲများသို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ တစ်နေ့တာ အထူးအစီအစဉ်များအကြောင်း ဖောက်သည်များအား အသိပေးရမည်။ linens, silverware and glasses တို့ကို နေရာချခြင်းဖြင့် စားပွဲများကို ပြင်ဆင်ရမည်။ Customerတောင်းဆိုချက်အရ မီနူးအကြံပြုချက်များကိုပြောပြရမည်။
ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Sales and Marketing Executive (သို့မဟုတ် ဆိုင်အရောင်းစာရေး) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Accountant ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
မှန်သန့်ရှင်းရေးပိုင်းနှင့် ပက်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ အထပ်အမြင့်သို့တက်၍ Safety Belt များဖြင့် လုပ်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ဘောနပ်စ် , အချိန်ပိုကြေး, လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ရလဒ်
. MD ရုံးအသွားအပြန် ၊ Meeting အသွားအပြန် ၊ က‌လေးကျောင်းအပို့အကြို မောင်းနှင်ပေးရမည်။ . မော်တော်ယာဥ်၏ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း ၊ စက်နှိုး/စက်စမ်း ပြုလုပ်ခြင်း ၊ စက်စီချောစီများ စစ်ဆေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရုံးချိန် - မနက် ၈ နာရီ မှ ည ၆ နာရီ အလုပ်ပိတ်ရက် - Sunday and Gazetted Holidays and Public holidays.
တင်သောနေ့: 13 May 2022
၁။ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား စိတ္၀င္စားစြာ ေရာင္းတတ္ရမည္။ ၂၊ နယ္ပယ္အသစ္ Customer အသစ္မ်ားရွာေဖြေရာင္းခ်နိုင္ရမည္။ ၃။ အေရာင္္းမ်ားရွွိပါက ေရာင္္းခ်ေပးရန္အတြက္ ပစၥည္းထုတ္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ၄။ အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ အေရာင္းကားမ်ားအတြက္ Sales Voucher မ်ား ျပဳလုပ္ ေပးရမည္။ ၅။ Order မ်ားပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ပိုးျပီး ပစၥည္း ပို့ေဆာင္ေပးရမည္။ ၆။ Online Sales မ်ားျဖစ္သည့္ Facebook Page Sales, Shop.com, Shopmyar အစရွိသည္တို႔ အား ေရာင္းခ်ရန္အတြက္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၆။ ကုန္ေရာင္းျပန္္ေပးမ်ားရွိပါက ျပန္လည္လက္ခံ သိမ္းဆည္းရမည္။ ၇။ ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးသံုးပစၥည္းလက္က်န္မ်ားအား စာရင္းဌာနႏွင့္ အပတ္စဥ္စေနေန႔တိုင္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီး Report တင္ေပးရမည္။ ၈။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္္တင္ျပရမည္။ ၉။ ကုမၸဏီသို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အၾကံဥာဏ္္ေကာင္းမ်ားေပးႏိိုင္ရမည္။ ၁၀။ သက္ဆိုင္္ရာမန္ေနဂ်ာမွ လိုအပ္မႈအလိုက္ ထပ္မံေပးအပ္လာသည့္တာ၀န္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ အေရာင္းဌာနတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမည္သည့္ဌာနတြင္ျဖစ္ေစ လိုအပ္မႈရွိပါက ၀ိုင္း၀န္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ ၁၁။ မိမိ၏အထက္အရာရွိ၊ တန္းတူလုပ္္ေဖာ္ကိိုင္ဖက္ႏွင့္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား ေလးစားမႈ ျဖင့္ ေျပျပစ္္စြာျပဳမႈေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္။ လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္သင့္္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမႈမ်ား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားျဖင့္သာ ေနထိုင္္ရမည္။
Education First Group
ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Housekeeping Manager (သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းအတွင်း ထိရောက်သော စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အတွေ့အကြုံရှိသော နေရာထိုင်ခင်း/လည်ပတ်ရေးမန်နေဂျာကို ရှာဖွေနေပါသည်။ - စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် စနစ်တကျ စီစဉ်ပေးခြင်း။ - ပြီးပြည့်စုံသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ပေးခြင်း - ရုံးခန်းတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားပြီး စက်ကိရိယာများ အားလုံး အလုပ်လုပ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရမည်။ - ရုံးသုံးပစ္စည်းများစာရင်းကို စောင့်ကြည့်၍ လိုအပ်သလို စီမံခန့်ခွဲပေးရမည်။ - စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်း၊ စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Rewards on performance
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် အချိန်ပြည့် Junior Accountant ရာထူး2နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် နှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူကို လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
Sales Representative(Dagon Seikkan)
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော တာမွေမြို့နယ်တွင် အချိန်ပြည့် Sales Representative ရာထူး2နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် နှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူကို လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် အချိန်ပြည့် Senior Sales Associate ရာထူး5နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် နှင့် အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် အချိန်ပြည့် Assistant Supervisor ရာထူး3နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် နှင့် အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
Mechatronic အင်ဂျင်နီယာ | Engineer (Mechatronic)
တောင်ဥက္ကလာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Junior Service Engineer (သို့မဟုတ် Mechatronic အင်ဂျင်နီယာ) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။
Sales Representative Drive (အရောင်းမောင်း)
သတ်မှတ်ထားသောနယ်မြေအတွင်း Target Volume များကို ရရှိစေရန် ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆိုင်များတွင်ရောင်းချခြင်း။ သတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ် (ဧရိယာ)အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆိုင်တိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ Customer များနှင့်ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ကိန်းဂဏန်းများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချနိုင်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - Basic Salary + Driving Allowances + Incentive + Social Welfare
House Keeper (3 Posts)
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် House Keeper (3 posts) ရာထူး3နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
Office Staff (Job Training)
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Office Staff (Job Training) (သို့မဟုတ် စာရေး) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံမရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
Sales And Marketing (Job Training)
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Sales and Marketing (Job Training) (သို့မဟုတ် ဆိုင်အရောင်းစာရေး) ရာထူး5နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံမရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
အကျိုးအမြတ်: Training ကာလအတွင်း Transportation fees ကို ကုမ္ပဏီမှ ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်
- စာရင်းအင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ငွေကြေးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်သဘောပေါက်လုပ်ကိုင်ရမည် - ရောင်းစာရင်း အ၀ယ်စာရင်းများကို သေချာစီစစ်ပြီး စာရင်းပြုစုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ဘောင်ချာများစစ်ဆေးခြင်း။ - စာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲခြားခြင်း ၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။ - စာရင်းများမှန်ကန်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း။ - စာရွက်၊ စာတမ်း၊ ဘောင်ချာများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။
တင်သောနေ့: 12 May 2022
၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် အချိန်ပြည့် Sales Representative ရာထူး2နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင်အ ချိန်ပြည့် CCTV Service Technicianရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ လုပ်သက် - အတွေ့အကြုံရှိသူကို လစဉ် လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
-Hotel Kitchen တွင် ၃နှစ်နှင့်အထက် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။(Demi Chef De partie)ရာထူးနှင့် အထက်ဦးစားပေးမည်။ -Head Chef ၏ Recipe များနှင့် instruction များအတိုင်းလိုက်နာချက်ပြုတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အာရှနှင့်ဉရောပ အစားအစာများ ချက်ပြုတ်တ်သူဖြစ်ရမည်။ -Culinary terms သိရမည်များနှင့် Utensils များ equipments များ အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။ -အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုသူဖြစ်ရမည်။
Security ( လုံခြုံရေး For Mandalay)
(မန္တလေးဒေသခံဦးစားပေးခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်/ မန္တလေးစွယ်တော်ကား၀င်း/ကားကြီး၀င်းအတွင်း တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်)
မြောက်ဥက္ကလာ၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Accountant (သို့မဟုတ် အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင်) ရာထူး5နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။ - ဘောင်ချာများစစ်ဆေးခြင်း။ - စာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲခြားခြင်း ၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။ - စာရင်းများမှန်ကန်မှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း။ - စာရွက်၊ စာတမ်း၊ ဘောင်ချာများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။